Izinzuzo ezi-7 zeDijithali Display - Izimpawu ze-Digital Multi Display Digital
Awekho amazwana ngezinzuzo ezingu-7 zeDigital DisplayPosted in I-Digital Signage By ClemPosted on 20 / 05 / 2021 18 / 06 / 2021
1. Nguwe olawula ukukhangisa kwakho
2. Ukuzivumelanisa kalula nebhizinisi lakho
3. Izinketho eziningi zesoftware
4. Ukuvuselelwa kokuqukethwe okusheshayo
5. Qokomisa umsebenzi wabanye
6. Isibonisi esinamandla
7. Isiza abantu
Ngabe usanqikaza ukusebenzisa i-Digital Display ukukhombisa ibhizinisi lakho noma ufuna ukuthola ezinye izindlela zokuyisebenzisa? Ngemuva kwalokho le ndatshana ingeyakho! Siphakamisa izinzuzo zakho eziyi-7 zeDigital Display ngakho-ke kungani ungazivumeli ukuba uyengwe yilobu buchwepheshe obusha obutholakala kalula?
Siyazi kwa-Easy Multi Display ukuthi ukukhangisa kungabiza kakhulu phakathi kokuphrintwa kwamakhadi akho ebhizinisi, ukuphrinta amaflaya ukugqamisa ibhizinisi lakho noma i-SEA (Search Engine Advertising) ... Ekugcineni, izindleko zokukhangisa zingabiza kakhulu. Ngenkathi nge-Digital Signage ukhokhela kuphela i-hardware nesoftware! (usadinga ukuba nesoftware enhle! Uma ufuna ukwazi kabanzi nge-Easy Multi Display, sincoma ukuthi ufunde lezi zihloko ezimbili.
"Kungani i-Easy Multi Display iyisoftware enhle kakhulu yezimpawu zedijithali?"
"Yimiphi imisebenzi esemqoka ye-Easy Multi Display?).
Mayelana nezikrini, i- IConseil Supérieur de l'Audiovisuel (isikhungo saseFrance esakhiwe e1989 ngenhloso yokulawula ama-medias eFrance) silinganisela ukuthi inani lezikrini emndenini waseFrance cishe zingama-5,5 izikrini, inani elanda minyaka yonke. Kuyamangalisa, akunjalo?
Kepha inani lezikrini aligcini ngokwanda emakhaya kepha nakumabhizinisi abo bonke osayizi. Nginesiqiniseko sokuthi ngenkathi uthenga nezingane zakho, umyeni wakho noma umkakho usuvele ubone izikrini zokukhangisa. Lezi zikrini, isikhathi esiningi zigqamisa iphromoshini. Kujwayelekile, izikrini zibiza kancane nangaphansi. Manje usungathola izikrini ezishibhile kakhulu. Uma ufuna eminye imininingwane, zizwe ukhululekile ukufunda le ndatshana ethakazelisa kakhulu evela kwa-Cnet "Ingabe ama-TV ashibhile ngempela kunanini ngaphambili?".
Intengo yekhompyutha incike kulokho ofuna ukukwenza kepha ibanga lentengo liphathelene ne-150 € kanye ne-1000 €. I-Easy Multi Display iyatholakala kusuka ku-149 € (ngaphandle kokubhalisile) nesikrini esiphakathi kuka-100 € no-800 €. Ekugcineni, uhla lwamanani esisombululo esiphelele luphakathi kuka-400 € kanye no-3000 € okhokhwa kanye kuphela!
Ku-Easy Multi Display, siyazi ukuthi wonke amabhizinisi ahlukile, ahlukile futhi anomlando wawo. Ngakho-ke yini iphuzu lokubukeka njengelinye ibhizinisi lapho ungaba nobunikazi bakho?
Ufuna ukufaka isikrini esitolo sakho ukukhuthaza umkhiqizo? Bese ukhetha uhlelo lwangaphakathi. Ukhetha ukuheha ukunakwa kwethemba elingaphandle kwesitolo sakho? Kungani ungakhethi uhlelo lwangaphandle? Uyangabaza phakathi kwalokhu okubili? Bese ukhetha uhlelo olungaphelele! Kungani ungakhethi lezi zinketho ezintathu ndawonye?
Akusekho kuwe ukujwayela uhlelo lokubonisa lwedijithali kepha uhlelo lokukhombisa lwedijithali okufanele livumelane nawe!
I-Intanethi iphinde yenziwa ngentando yeningi ekhaya, futhi ngenxa yalokho, inani le-software emakethe liqhume! Lokhu kujwayelekile impela ngoba ngonyaka we-2019 sebebalile onjiniyela abayizigidi eziyi-19 emhlabeni, ngokusho kwesiza saseFrance I-silicon.fr, le nombolo kufanele ifinyelele kubathuthukisi abayizigidi ezingama-40 ngonyaka ka-2030. Ngakho-ke ungakhetha isoftware oyifunayo ngokwezidingo zakho!
Kodwa-ke, uma singakuncoma isoftware yezimpawu zedijithali, lapho-ke sizokuncoma yethu Ukukhonjiswa Okulula isoftware, ngani? Vele ngoba siyidalile futhi siyazi ukuthi le software ingenye yamandla amakhulu, ephelele kakhulu futhi ingenye eshibhile emakethe.
Ezweni eliguqukayo lapho izidingo nezifiso zamakhasimende zingashintsha khona ngobusuku obubodwa, kunzima kakhulu ukugcina usesikhathini ukuze wanelise amakhasimende. Ngenxa yalokhu, abathengisi abaningi basemuva futhi lokhu kungathinta ukuthengisa kwabo njengoba kungenakamuva ngokukhangisa kwabo.
Nge-Digital Signage, ungahlela umkhankaso wakho wokumaketha emahoreni ambalwa, noma imizuzu! Konke okudingayo yisikrini, ikhompyutha kanye nesoftware efana ne-Easy Multi Display, uma unalezi zinto ezintathu lapho-ke usuvele unakho okokukhombisa.
Manje, udinga okuqukethwe, yilapho kushesha kakhulu, ungathatha izithombe zemikhiqizo yakho, amavidiyo noma wenze ama-montage wesithombe nge-software efana ne-Photoshop noma i-Gimp. Sivame ukusebenzisa i-Canva.com, esivumela ukuthi sakhe amakhasimende ethu okuqukethwe ngokushesha okukhulu futhi kalula! Ngenxa yalesi siza, ungakwazi ukuvumelanisa ngokushesha ukukhangisa kwakho nesikhathi sosuku, kumakhasimende akho nasezifisweni zakho.
Izimpawu zemfashini nezidijithali
Ngabe uneqembu labadwebi bemidwebo abakusebenzelayo? Unabangani abadwebi, abahleli bevidiyo, ababhali? Ungabeka umsebenzi wabo phambili ngokubonisa imisebenzi yabo esikrinini sakho, bazokubonga futhi babeke phambili abaculi besifunda sakho!
Nge-Easy Multi Display, ungakhombisa izithombe, amavidiyo, imibhalo nokunye okuningi ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa.
Ngenxa yeDijithali Display, uzokwazi ukuheha amehlo amathemba kalula futhi ngaleyo ndlela ube nethuba elihle kunabancintisana nabo! Kungani kufanele ubonise isikhangiso sephepha ngaphambili kwakho lapho ungakwazi ukwethula ngqo imikhiqizo yakho ngevidiyo? Ungaqiniseka ukuthi uzobamba iso lamathemba akho!
Ngaphezu kokuheha iso, uzokwethula ngqo umkhiqizo wakho futhi wazise ikhasimende ngamathuba alo, ngakho-ke uma umkhiqizo wakho uthakazelisa ikhasimende lapho-ke uzothambekela kakhulu ekuwuthenga!
Kungani ubeke phambili imikhiqizo yakho kuphela? Ungabeka uhlelo lwakho lwezimpawu zedijithali ukusiza abahamba ngezinyawo! Ungabasiza kanjani? Khombisa ukusakazwa bukhoma kwesiteshi sezindaba ngaphambili kwakho ukuze ugcine abahamba ngezinyawo beziswa ngezindaba zosuku. Ungakhombisa futhi isibikezelo sezulu, imephu yedolobha, amashejuli webhasi ...